Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှု၊ မြေပြိုမှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၁၁၇ ဦးအထိမြင့်တက်လာ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနေသည်ကို ဧပြီ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- BNPB/Xinhua) Asia
ဂျကာတာ၊ ဧပြီ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် ဆာရိုဂျာ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရေကြီးရေလျှံမှုများနှင့် မြေပြိုမှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၁၁၇ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီက ဧပြီ ၆ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“သေဆုံးသူရုပ်အလောင်း ၁၁၇ ခုကို တွေ့ရှိထားပါပြီး လူ ၇၆ ဦးကတော့ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု အေဂျင်စီ၏ အကြီးအကဲ Doni Monardo က အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။သေဆုံးသူများမှာ အရှေ့ဖလော်ရက်စ်ခရိုင်တွင် ၆၀ ဦး၊ လမ်ဘာတာခရိုင်တွင် ၂၈ ဦး၊ အာလော်ခရိုင်တွင် ၂၁ ဦး၊ မာလာကာခရိုင်တွင် ၃ ဦး၊ အန်ဒဲခရိုင်တွင် ၁ ဦး၊ ဆာဘူရိုင်ဂျွာခရိုင်တွင် ၂ ဦး၊ ကူပန်ခရိုင်တွင် ၁ ဦးနှင့် ကူပန်မြို့တွင် ၁ ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် လူပေါင်း ၁၄၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အခြားသူ ၈,၄၂၄ ဦး နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရပြီး အများပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံ ၄၅ လုံး ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထို့ပြင် အိမ်ခြေ ၃၄၃ လုံး အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သလို အတော်အသင့်ပျက်စီးသော အိမ်ခြေ ၁၃၃ လုံးနှင့် အနည်းငယ်ပျက်စီးသော အိမ်ခြေ ၁၁၀ လုံးရှိကြောင်း သိရသည်။
အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ် တောင်ပိုင်း Savu ပင်လယ်အား ဆာရိုဂျာမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးနောက် မိုးသည်းထန်ခြင်းများ၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများ၊ ပင်လယ်ရေလှိုင်းများ ၆ မီတာအထိ မြင့်မားခြင်း စသည့် ထူးခြားမိုလေဝသများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသ၊ ရာသီဥတုနှင့် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာအေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆာရိုဂျာ မုန်တိုင်းသည် ဧပြီ ၆ ရက်က တစ်နာရီလျှင် ၁၁၀ ကီလိုမီတာမှ ဧပြီ ၇ ရက်တွင် ၁၃၀ ကီလိုမီတာအထိ တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။“လေတိုက်နှုန်းက အမှန်တကယ်မြင့်တက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုန်တိုင်းက ရွေ့လျားသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအပေါ် သက်ရောက်မှု အားလျော့သွားပါတယ်” ဟု အေဂျင်စီ အကြီးအကဲ Dwikorita Karnawati က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Death toll from floods, landslides in Indonesia's East Nusa Tenggara province climbs to 117
JAKARTA, April6(Xinhua) -- The death toll from floods and landslides triggered by Tropical Cyclone Seroja in Indonesian province of East Nusa Tenggara rose to 117, the National Disaster Management Agency said on Tuesday.
"The number of bodies that have been found is 117, while 76 people are still missing," the agency's head Doni Monardo toldavirtual press conference.
The deaths were reported in East Flores district (60), Lembata district (28), Alor district (21), Malaka district (3), Ende district (1), Sabu Raijua district (2), Kupang district (1), and Kupang city (1).
The disasters also left 146 people injured and 8,424 others displaced, and damaged 45 public facilities.
Meanwhile, 343 houses were heavily devastated, 133 were moderately destroyed and 110 were slightly damaged.
The Meteorology, Climatology and Geophysical Agency said that extreme weather such as heavy rains, strong winds, and high sea waves of up to six meters occurred after Seroja hit the Savu Sea, south of East Nusa Tenggara province.
Seroja's wind speed will pick up to 130 km per hour on Wednesday from 110 km per hour on Tuesday.
"The wind speed is indeed increasing, but the impact on Indonesia is getting weaker because it is moving away," the agency's head Dwikorita Karnawati said. ■
1- Photo provided by Indonesia's National Disaster Management Agency (BNPB) on April 4, 2021 shows landslide in East Nusa Tenggara, Indonesia. (Photo by BNPB/Xinhua)
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၃၈ ဦးထိမြင့်တက်
Next Article အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံ၌ ကျောင်းများပိတ်ထားစဉ် မော်တော်ကားအတွင်း ဆက်လက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြုလုပ်